Sale & Marketing Archives - Page3of4- Glory Assumption Space
Sales & Marketing Staff - Female (15) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1.	Sales & Marketing Staff - Female (15) Posts / Salary 150000 Kyats / Lanmataw,Thingankyun Township Requirements -	ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -	Computer Basics. -	Marketing ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရပါမည်။ -	ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales & Marketing Staff - Female (10) Posts
Location in : လမ်းမတော်
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1. Sales & Marketing Staff - Female (10) Posts / Salary 200000 Kyats / Lanmadaw Township Requirements - Any Graduate. - Computer သုံးနိုင်ရမည်။ - Marketing ပိုင်း အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိမည်။ - စကားပြောပြေပြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်ထက်မကျော်ရ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) -
Sales & Marketing Staff - Female/Male (10) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Sales & Marketing Staff - Female/Male (10) Posts / Salary 150000 Kyats / Thingangyun Township Requirements -	အတွေ့အကြုံမရှိ သူများလည်း လျှောက်ထားလို့နိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Admin -F(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။ကြည့်မြင်တိုင်မြို.နယ်တွင်ရှိသောCompanyတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိသည်။ 1.Sales Admin –F(5)Posts/Salary-150000 Kyats/Kyi Myin Daing Township - ဘွဲ.ရ - အသက် ၂၀နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Computer သုံးနိုင်ရမည်။ - ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ - Reception ပိုင်းနှင့်Marketingများအတွက်Supportingပေးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန်)
Sales & Marketing - M(10)Posts
Salary Rang : 160000
မင်္ဂလာပါရှင့်။ပုစွန်တောင်မြို.နယ်တွင်ရှိသော Companyတွှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်းထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Man,Sales Girl –M/F(20)Posts/Salary-120000+++Kyats/Pazuntaung Township - ၁၀ တန်း - အေ၇ာင်းပိုင်းအတွေ.အကြုံရှိရမည်။ -လုပ်သက် ၁နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန်)
Senior Accountant (AR/AP/Stock) -M/F(3)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့် ။Distribution Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Senior Accountant( AR /AP/Stock) - M/F (3) Post /Salary - 350000 Kyats /Dagon Township -B Com ( or ) LCCI Level (III ) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ MYOB Software ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ် ရမည်။ Tradingပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါကအချိန်ပို ဆင်းပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ စည်းကမ်းပိုင်း (ငွေကြေး၊စာရင်းဇယား)နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသေချာစွာဆောင် ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။Under Pressure တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff (Real Estate)-M/F(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့် ။ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Co.,တွင် ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင် ရမည် Position များအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales & Marketing Staff ( Real Estate) – M /F (5) Posts / Salary – 120000 Kyats and above /Kamaryut Township - ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - Computer (Word ,Excel ,Internet & Email )ကိုကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင် ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff -Female(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။Aluminium Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales & Marketing Staff – Female (5)Posts/Salary – 130000 Kyats /Mingalardon Township - ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများ - Computer (Word,Excel )ကိုကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ - နေ၊စား၊ငြိမ်း စီစဉ်ပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff - Female(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။Aluminium Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Staff – Female (5)Posts/Salary – 150000 Kyats /Tarmwe Township - ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများ - Computer (Word,Excel )ကိုကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff - Female/Male (5 ) Posts
ဘွဲ့ ရ ( သို့မဟုတ် ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) အထက်ရှိရမည်။ အသက် (၂၀-၃၀ )အတွင်း မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံများပါ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ……………
Sales & Marketing Assistant - Female (5) posts
Any Graduate Age below 25 years old At least 1 years experience in related field Good reporting skill & interpersonal skill Ability to work as teamwork If necessary, can be able to travel
Sales & Marketing Staff – M/F (5)Posts
Salary Rang : 100000
- ၁၀ တန်း(သို့မဟုတ်) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။
PG Girl – Female (5)Posts
- ၁၀ တန်းအောင် - Merchandising ပိုင်းလည်းတွဲလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။
Sales & Marketing - Female (5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင်ရှိသောဓါတ်ခွဲခန်းကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Sales & Marketing – Female (5)Posts/Salary – 100000 Kyats/လမ်းမတော်မြို့နယ်။ -	၁၀ တန်းအောင် -	အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ -	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
အရောင်းဝန်ထမ်း - အမျိုးသမီး (၅) ဦး
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၆) လရှိရမည်။ စကားပြောပြေပြစ်ကျွမ်းကျင်ရမည်။